Shira Filannoo keessaa! Komaand Post jalatti lallaba duula na filadhaa! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShira Filannoo keessaa! Komaand Post jalatti lallaba duula na filadhaa!
Komaand Post jalatti lallaba duula na filadhaa!
Wal irratti ilaaluun cubbuudha. Kutaan Oromiyaa walakkaan dhiigaan faalamaa, walakkaan waraanaan goolaama muraasni ammoo akka waa’ee filannoof ko’ommatuuf karoora waggaa tokko dura OPDO dhaan qabame.
Lafoota Oromiyaa hedduun komaand Post jalatti ugguranii filannoof qophaa’uutti jirama. Kun akkamitti? Jedhee haga tokko iyyafachuu yaaleen jira.
Dubbiin akkana. Uummata komaand Post jala jiru erga filannoon darbee Mootummaan biyya bulchu ijaaramee booda filannoo qofaatti qopheessamaaf jedhame. Mootummaan filame jedhe godina muraasaan murtaa’a jechaadha. Ammatti Godinota Oromiyaa filannoo miilanaa keessaa qooda hinfudhanne kanneen komaand Post irratti labasameef labsamuuf jiru, Godinota Wallaggaa Arfan, Godina Iluu Abbaa Booraa, Godina Buunnoo Beddellee, Godina Shaggar Kaabaa, Godina Shaggar Lixaa fi Godinota Kibba Oromiyaa Booraanaaf Gujiidha.
Godinaalee kana keessatti filannoon hingaggeeffamu. Kun maaliif ta’e? Kan jedhuuf lafoota dhibbaa dhibbatti mootummaa kana hinfilanneef lafoota ABO filatu jedhaman akka ta’edha kan naa himame. Godinaalee kanaaf filannoon erga darbee, waggaa tokko ykn waggaa lama booda carraan filannoo kun isaaniif laatama jedhame. Sababaa kanaaf bakkoota kana mootummaan waraanaan tiksataa akka turuuf yaadame.
Mootummaan lafoota yaaddoo qabu, lafoota na hinfilatan jedhee yaadu mara irratti labsii yeroo muddamaa labsee, labsuufis jira. Kana jechuun lafootiin labsii waraanaa jala jiran dirqamaan mootummaaf laatamu jechaadha.
Dhimma kana paartileen Oromoo maal yaadu?
Akkan iyyaafadhetti Paartilee mormituu Oromoo hedduun akka Komaand Post’n kun hinkaane barbaadu. Sababaan kanneen OPDO’n tumsanii fi kanneen ABO hinfeene marti isaanii labsii waraanaa Godinoota Oromiyaa hedduutti filannoo dursee labsameef labsamaa jiru kana gammachuudhaan fudhatan. Isaanis bakka kanatti filamuu akka hindandeenye kanneen amananidha jedhama. Kana irraa kan hubatamu fedhiin paartilee Oromoo hedduun, kanneen komaand post kana balaaleffataa hinjirre, fedhii siyyaasaa dhuunfaa isaanii malee fedhii Oromoo guutuuf warreen ayyamamaa hintaane waan ta’aniifi.
– Uummatni Oromoo tokko ta’ee, akka labsiin muddamaa kun kaafamu dhiibbaa taasisuu qaba.
– uummatni keenya Paartileen siyyaasaa Labsii waraanaa Oromoo irratti labsamee jiru kana akka balaaleffatan dhiibbaa geesisuu qaba.
– Dhaabbilee siyyaasaa waa’ee Komaand Post kana hindubbatin ammoo kanneen du’aaf ajjeechaa Oromootti gammadan akka ta’an mirkaneeffataa adeemuudhaan dhaabbilee siyyaasaa qabu mara irratti Oromoon dhiibbaa haa geessisu.
– Dhaabbilee siyyaasaa Oromoon alatti dhaabbbilee dhimma Oromoof ijaaraman, kanneen mirga dhala namaaf qabsaa’an akka dhimma kana hanga sadarkaa addunyaatti gabaasan dhiibbaa geesisuutu fala.
Kun ta’uu hafee Komaand Post jalatti filannoon Godina Oromiyaa muraasa qofaaf akkuma karoore kanatti kan adeemu taanan maaltu dhufa?
1. OPDO’n bakkatti of deebisee of ijaara.
2. Marroo walitti fufiinsaaf Oromoon du’aaf saaxilama.
3. Namoota beekamtii qaban muraasi Ministeera biyyattii keessa seenanii, garbummaa jalatti Oromoo akka tiksan ta’a.
4. Namoota beekamtii qaban keessaa baasanii Peresedant dabalatee OPDO jalatti aangoo qooddatanii, garbummaa dhuma kaleessaa jalatti akka Oromoon tikfamu ta’a.
5. Duulli ABO fi Oromoo irratti akkuma baroota darbanii banamee, hidhamuuf ajjeefamuun Oromiyaa maratti babal’ata.
Kanaaf dhaabbilee siyyaasaa Oromoo irratti akka dhimma kana balaaleffatan dhiibba geessisuun fala dhumaati.
Ahead of the 2020 vote, Amnesty International challenges Ethiopia https://t.co/ZQoSY5WG2u pic.twitter.com/GU4izTZXvS
— Kichuu (@kichuu24) January 31, 2020
OMN: Simannaa Jila KFO Adaabbaatti (Jan. 31, 2020)
Appalling reports of violences against civilians come from Wellega and Guji, Oromia state, inflicted by Ethiopian troops deployed there to allegedly suppress insurgents.
Access to the number of casualties is difficult for these areas being under the state of emergency and cut off from data networks.
Nevertheless, 149 civilians were confirmed dead from January 3 to 23rd 2020 in only 15 accessable places of West Wellega Zone. Namely:
Lalo Assabi 4
Jimma Horo 4
Dambi Dolo 4
Boji Coqorsa 3
Babo Haru 2
Total 149 people
From this it can be surmised that a huge number of people hurting for the rest of West Wellega, East Wellega, and Guji Zones since last year.
International human rights groups should press the Ethiopian government for an independent probe into the situations and immediate evacuation of its troops from the areas in question.
~ Search Google satellite map for West Wellega, East Wellega, and Guji Zones of Oromia, Ethiopia.
Mohammed tuke says:
yaadni kun paartileen siyaasa oromoo kan tokkoomuuf mariirra jiran akka hin milkoofnee fi wal jibbaniif yaadameeti kan barraa’e. garuu yaada cubbamaa akkanaa kana kalaqa mana jibbaa fi inaaffaa qabuun kan yaadame jedheetiin fudhadha an gama kootiin. akka waan paartileen siyaasa oromoo ODP waliin hojjechaa jirtuu fakkeessanii dhaleessuun cubbu.